Global Aawaj | » नेकपा विवाद : के भन्छन दोस्रो तहका नेता? नेकपा विवाद : के भन्छन दोस्रो तहका नेता? – Global Aawaj
नेकपा विवाद : के भन्छन दोस्रो तहका नेता?
बुटवल । सत्तारुढ दल नेकपा फुटको संघारमा आएपछि नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्त व्यक्त गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच कुरो बाझिएपछि फुटको संघारमा पुगेको नेकपाका नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा ट्विटरमा व्यक्त गरेका विचारहरु जस्ताको त्यस्तै :
हाम्रो पार्टी एकता महान क्रान्तिकारी उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर र धेरै ठूलो मेहनत पसिना लगाएर हासिल गरिएको हो। यसको विफलता र पार्टी फुट कदापी उचित र सही हुन सक्दैन। फुट र फुटजन्य क्रियाकलाप राष्ट्र एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनको आवश्यकता, आम कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरुको चाहना र जनादेश बिरुद्ध हुन्छ। तसर्थ पार्टी एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिऔं र आ-आफ्नो ठाउँबाट एकताको रक्षाका निम्ति सक्रिय पहल गरौं । पार्टीको बैठक बसौं र सबै पक्षहरुका बारेमा खुला छलफल गरौं । पार्टीभित्र देखिएको छलफल, बहस र मतभेद अन्ततः बिचार, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी अबधारणासँग सम्बन्धित रहेको हुन सक्ने भएपनि अहिले नै त्यसबारेमा औपचारिक छलफल नभएकाले स्पष्ट मतभेद देखापरिसकेको छैन। तसर्थ यतिबेला पार्टी एकताको रक्षाको निम्ति सबै बाट एउटै कुरामा इमान्दार प्रतिबध्दता भए पुग्छ, पार्टीको बिधि, पध्दति एवं निर्णयको पालना र कार्यान्वयन। ब्यक्तिवाद, अहंकार, आवेग र आक्रोशले समाधान दिदैन र कसैको हित गर्दैन। देश, जनता, श्रमजीवी बर्ग र पार्टी तथा आन्दोलन लाई केन्द्रमा राखेर सोचौं र सकारात्मक निष्कर्ष निकालौं। जान वा अन्जानमा देशी र बिदेशी प्रतिकृयावादी शक्ति हरुको चाहाना पुरा गर्ने कार्य कसैबाट हुन नजाओस्, सबैले समयमै सोचौ।
सांसदहरु राजनीतिक अस्थिरता र विभाजनको पक्षमा जाॅदैनन । पार्टी विभाजन संभव छैन । यो विवादले निम्त्याएको तनाव मात्रै हो ।
अहिले नेकपा मा देखिएको विवादले पार्टी फुटको दिशातिर गयो भन्ने समचारहरु विभिन्न सामाजिक संजालहरुमा देखिन्छन । आम नेता, कार्यकर्ता , शुभचिन्तक र जनताहरुको भावना विपरित गएर नेकपा फुट्दैन र फुट्नु पनि हुदैन । आम जनताको चाहना अनुु्सारनै सरकार र पार्टीलाइ जनमुखी बनाउदै अहिलेको कोरोना महामारी को नियन्त्रण , निशुल्क उपचार , वाढीपहिरो मा परेकाहरुको उचित व्यवस्थापन को विषयमा सामुहिक निर्णय सहित पार्टी एकढिक्का भएर अगाडी वढ्ने छ । निराश नहुन र एकताको पक्षका लागी उभिन अपिल गर्दछु ।
पार्टी किन फुट्ने होला ? अनि कसले फुटाउने होला ? सबै थोक गर्न दिएकैछ/पाएकै छन्। अब पार्टी फुटाएर त्यो बैभव पाउने पनि होइन। पार्टी सदस्य र समर्थकको दिमाग किन खाएको होला?